Dhenimaki - ALinks
KuDenmark Kufamba: gwara rerwendo rwekuDenmark
December 1, 2020 Maitri Jha Dhenimaki, famba
'Denmark', inyika yakanaka uye yakapusa nyika kune vafambi. Nyika yacho ine makomo, madziva uye mahombekombe egungwa; ine nzvimbo dzakanaka dzeminda dzakafanana nemawere akachena eMons Klint. Zvakare, chinhu chakanakisa nezveDenmark ndechekuti yakachena
Kuwana Kwaungaita Basa MuDenmark.
November 16, 2020 Antika Kumari Dhenimaki, mabasa
Kune nzira dzakawanda dzekunze vanopedza kudzidza kuti vawane basa kuDenmark. Zvichienderana nehukama hwako, ungangodaro usingade mvumo yekugara kwenguva pfupi. Kana iwe uchibva kune imwe nyika, saka unofanirwa kunge uine vhiza inoshanda. Mabasa
Kunanga kuDenmark, Hezvino zvinodiwa zveVisa Zvikumbiro
November 9, 2020 Antika Kumari Dhenimaki, vhiza
Denmark, zviri pamutemo Humambo hweDenmark, inyika yeNordic. Denmark chaiyo, inova yekumaodzanyemba kwenyika dzeScandinavia. Zvichienderana nekufamba kwako kuenda kuDenmark, mhando dzakasiyana dzemavisa dzinoshanda kune chiitiko. Kunyangwe iwe uri kuronga ku
Kuenda kuDenmark, Tarisa Nguva Yakanaka Yekushanya
June 9, 2020 Maitri Jha Dhenimaki, famba
Iyi nguva yakanakisa yekushanyira Denmark kutanga kwemazhizha, paine zhizha rakajeka nemakore akajeka. Iwe unogona kuronga rwendo rwako munaJune. Sezvo mazuva achireba munaJune muDenmark, unogona kuita mabasa mazhinji ekunze panguva iyoyo
Kutsvaga Kumabhangi Akanyanya MuDenmark?
Dai 22, 2020 Maitri Jha Dhenimaki, mari
Denmark ine chikamu chikuru chebhangi. Nekuti vanhu veDenmark vanofarira kuisa pfuma yavo mumabhangi epamhepo. Zvakare, chikamu chebhengi repamba muDenmark chinobata 87.52% yehuwandu hwezvigadzirwa. Kusiya kumashure kwemabhangi ekunze ayo anongori gumi nemaviri muzana
Iwo Akanakisa Ehutano Hutano Services muDenmark
Dai 17, 2020 Antika Kumari Dhenimaki, utano
Hutano hwehutano muDenmark hunonyanya kupihwa neko kwenzvimbo uye hurumende dzepakati. Vanamukoti, kuchengetedza dzimba, uye hutano mabasa ibasa revagari vemo 98. Danish mari inoshandiswa nehurumende pakurapa kwehutano inosvika gumi nemazana gumi muzana muzana weGDP. Chinyorwa ichi chicha
Kutungamira Gwara reDenmark, Scandinavia
Dai 16, 2020 Antika Kumari Dhenimaki, tenderera
Denmark inyika inoumbwa nezvitsuwa zvakawanda. Zvitsuwa izvi zvakabatana chaizvo neguta. Kwete maguta nemataundi eDenmark chete akabatana, asi nzvimbo zhinji muEurope nekutenderera nyika dzinogona kusvika kuDenmark
Sei Maitiro Ekunyorera Asylum MuDenmark?
Dai 13, 2020 Maitri Jha Dhenimaki, vapoteri
Unoda kunyorera hupoteri muDenmark kupfuura zvaunofanirwa kunge uripo munyika. Denmark yakavhurika kune chero munhu wekune dzimwe nyika anoda kuendesa fomu yehupoteri. Asi haugone kunyorera kana iwe uri mune imwe nyika
Nzvimbo Dzakanakisa dzekutenga muDenmark
November 14, 2019 Shubham Sharma Dhenimaki
IDenmark ndiyo nzvimbo ine vakawanda marara emahombekombe uye mafashoni zvitoro zvakapararira. Zvitoro izvi zvakapararira zvese pamusoro peCopenhagen. Danish capital iri yekutenga Mecca yeese fashionista uye dhizaini inoda uyo anofarira Danes 'minimalist maitiro. Dzimwe nguva,
Iwo Ekumusoro Akakwira Vashanyi Nzvimbo dzekushanyira MuDenmark
November 13, 2019 Shubham Sharma Dhenimaki, zvinhu zvekuita
Denmark inyika diki yeScandinavia. Iyo nyika ine inokatyamadza nharaunda umo vashanyi vanogona kunyura mune rwechisikirwo runako rwezvakatenderedza. Nyika ino yakaropafadzwa nemusanganiswa wakakwana wezvigadzirwa zvekugadzira, inoshamisa nzvimbo, yakasarudzika uye yakakura